Mandalay Bloggers Feeds Network တည်ထောင်ရန်
ပြည်တွင်းရှိ မန္တလေး Blogger များ နှင့် ပြည်ပရောက် မန္တလေး Blogger များ၏ သတင်းအချက်အလက်များ ဖန်တီးမှုများကို တစ်နေရာတည်းတွင် စုံစုံလင်လင် ဖတ်ရှူ့ လေ့လာနိုင်ရန်။
အထက်ပါအကြောင်းအရာနှင့် ပက်သက်၍ မန္တလေး Blogger များအားလုံးကို စည်းစည်းလုံးလုံးနှင့် Feeds Network မှာ ပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်သိသော မန္တလေး Blogger များ၏ စာရင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ Blogger များအပြင် ကျွန်တော်မသိသေးသော မန္တလေး Blogger များကိုလည်း ပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် ဒီပို့စ်မှာ Comment ပေး၍သော်လည်းကောင်း chanmyasoe@gmail.com နှင့် myochauhtun@gmail.com သို့ email ပေးပို့၍သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ် ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ Blogger တွေအားလုံးရဲ့အတူပြုချက်ကိုရယူပါမယ်။ ဒါကြောင့် ပါဝင်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိသူတိုင်းရဲ့ Comment ဒါမှမဟုတ် email ကို စောင့်ပါမယ်။ သုံးရက်မြောက်လို့မှ Comment ရော email ရော မလာလည်း ... List မှာထည့်ပြီးသားပဲဗျာ ( မှတ်ချက် - ဘာအကြောင်းပြချက်မှ လက်မခံ :D ) တကယ် ပါဝင်စေချင်တဲ့အတွက်ပါ :)
မပါဝင်လိုသော ကန့်ကွက်လိုသော Blogger များ ရှိလိမ့်မယ်လို့တော့ မယူဆတော့ဘူးဗျာ။ အားလုံးပါဝင်လိမ့်မယ်လို့ လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်ပါတယ်။ စောစောစီးစီး Comment ပေးပြီး ပါဝင်တဲ့ Blogger တွေကို မန္တလေး ရွှေဘဲမှာ ကျွေးမယ် :)
Updated: လာပါပြီ Mandalay Bloggers Feeds (MBF)
Bloggers Feeds ကို ဖန်တီးပေးခဲ့သော ကိုမျိုးကျော်ထွန်း(ကိုဖြိုး)ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်ကို လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုဖြိုးရေ။ မန္တလေးသတင်းတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ စုံစုံလင်လင် ဖတ်နိုင်ပါပြီ။ ကိုဖြိုးရေးထားတဲ့ MBF Post ကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Feeds တွေကို ကောင်းဆုံး ဖတ်ရှူ့နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ Google Reader ကို Recommended လုပ်ပါတယ်။
MBF သို့ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှူ့ရန် လိပ်စာ
မိမိရဲ့ Blog မှာ Link လုပ်ပြီးထားလိုပါက
MBF သို့ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှူ့သော Reader အရေအတွက်ကို ကြည့်ရှူ့နိုင်ရန်
<img src="http://feeds.feedburner.com/~fc/mandalay-bloggers?bg=99CCFF&fg=444444&anim=1" height="26" width="88" style="border:0" alt="MBF" /><a>
Labels: Blogger Mandalay
Myo Kyaw Htun 3:05 am
ahmei 3:16 am
imm that's pretty good.:)
i dun think i shold reject ur offer.
so just prepare to treat me something..hee hee :P
mg myo aung 4:40 am
I have that idea since i am enjoy creating blogs. At that time i named Myanmar Blogger Association (MBA). The aim is to gather all posted topics, and make friends, and share informations such as IT, networking or others. I also interested in care Health. sharing the kowledge of health. So try the Blogger network. Anything i can do, don't hasite to inform! mrsannoo@gmail.com
U Sann Oo.
Kalvin 6:47 am
Okay .. why dun I join in. ... Do I haveachoice .. heheheh .. since I'mamandalaythar .. I'm happy to be part of this. BTW .. what's the purpose of that feeder network .. and what are we doin' together ???
any sample ? or example ?
Hay Mar 7:00 am
CMS 11:02 am
I already mentioned the purpose in the post that is we can share and read mdy native blogger posts worldwide. For the sample, We'll let u know asap :)
ပါဝင်တယ် ဆိုရင်ပဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပြီဗျာ
ပို့စ်တွေကတော့ အမြဲတမ်း digest ဖြစ်နေမှာပါ :)
AYAR THAR LAY 1:12 pm
yeh! i will jon that........
Aung Chan 1:27 pm
ကြိုက်ပါတယ်အကို ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ စည်းစည်းလုံး လုံး အလုပ်တွေ လုပ်လို့ရတာပေါ့အကိုရ ဥပမာ အလှူအတန်းတွေစုပေါင်းလုပ်နိုင်တယ်။ တွေ့ဆုံပွဲတွေလုပ်နိုင်တယ်။ တခြားလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ မှာလည်း ပါဝင်နိုင်တာပေါ့။ ကောင်းတိုင်ပင် ဆိုးတိုင်ပင်ပဲ ကျွန်တော်တော့ ထောက်ခံတယ်။ အားပေးတယ်။
အောင်ချမ်းလင်း (ခ) ချမ်းလေး
Zaw Moe Aung 1:53 pm
Okay, Ta baw tuu bar dal :)
s_potato 1:56 pm
That'sasplendid idea .
Good to haveacontribution in Mandalay Bloggers Feeds Network!
But........I am notaMandalay Thu.
kyawmintun 2:25 pm
မပါလဲ မဖြစ်ဘူးထင်ပါရဲ့.. နောက်တာပါ။ ပါရမှာပေါ့။ အိုင်ဒီယာကောင်း တယ်လို့လဲ တခါတည်းပြောပါရစေ။
kosi31 5:43 pm
i can`t read some post.
what font they use?
မောင်လှ 2:51 am
ပါမယ်ဟေ့... ဘယ်မှာလဲ အိမ်သာ... ဟုတ်ပါဘူး... feed ကို ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်...
CMS 8:45 am
s_potato: it's fine :)
kosi31: zawgyi-one :D some sites; they haven't emebeded font yet
ကိုတုံ: အိမ်သာက ဟိုဘက်မှာ ... အဲ . မှားလို့
ကျေးဇူးပါဗျို့ ... ဒါမှ ဆရာတုံကွ :D
Steven Alexander 9:02 am
Yeah I want to join, sorry for reply lately.
Ko Nay Gyi 1:57 pm
ကိုချမ်းရေ ပါမယ်ဗျို့.... ဟေး.. ပါမယ်ဟေ့.... ငါကွ ပါမယ်ကွ... စောစောမသိတာနာတယ်ကွာ... ရွှေဘဲမှာကျွေးရင် စားစရာတွေကျန်ပါဦးမလားမသိဘူး... ဟူးဒါတွေစိတ်ညစ်တာ.... ကိုချမ်းရေ... Link ကို ကျွန်တော်ချိတ်တတ်သလိုပဲ ချိတ်ထားလိုက်တယ်... အဆင်ပြေလားတော့မသိဘူး... မပြေဘူးဆိုရင်ပြောနော်... ပြေရင်လည်းပြော... ကျွန်တော်သေချာပေါက်ပါမှာနော်...
nhit kuu 7:29 pm
ပါမယ်ပြောထားတဲ့ post ကဘယ်ချောင်တိုးသွားလဲသိဘူး။ ထက် post လိုက်ပြီ... ပါမယ်
CMS 7:34 pm
ဦးSteven :> No ပလုံပလုံ :)
နေကြီး :> လင့်ချိတ်ထားတ အိုကေပါတယ် တစ်ခြား Subscribe to တို့ဘာတို့ကိုလည်း sidebar မှာထည့်လို့ရသေးတယ် :) ပြန်လာရင်တော့ ရွှေဘဲမှာ တကယ်ကျွေးမှာ :D
nhit kuu :> ဟိုက်ရှ် :O ... ဒေါ်နှစ်ကူး .. ကြိမ်းလိုက်တဲ့ အကြိမ်း ဆွမ်းကို ထမစားဘူး :P ကျွန်တော် ခင်များလေးရဲ့ကွန့်မန့်ကို အခုမှ ရတာနော်။ Connection ကြောင့် ဖြစ်သွားရင်တော့ မတိဘူး။ အခုလိုပါဝင်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
Wai Myint Maw 8:23 am
လာတာနောက်တျသွားလို့ ရွှေဘဲနဲ့တော့ လွဲသွားပြီနဲ့တူတယ်ဗျာ...
ကိုချမ်းမြစိုးရေ ကျွန်တော်လဲပါမယ်ဗျ ။
yadanar 12:18 pm
ကိုချမ်း. . . . .
CMS 3:14 pm
wai myint maw :> ရွှေဘဲနဲ့လွဲပေမယ့်လည်း ရွှေဘဲဘေးက အကြော်ဆိုင်နဲ့မှီပါသေးတယ် :P
ပါဝင်တဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် :)
yadaner :> ပါဝင်တဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ။
ရတနာ့Blog ကို List မှာထည့်လိုက်ပါပြီ မန်းလေးအတင်းတွေကို မျှော်နေမယ်...အဲလေ သတင်းတွေကို :D
gue 8:18 am
မြန်မာ blog တွေက အရမ်းစိတ်ဝင်စား ဖို့ ကောင်းတယ်နော်။blog ပိုးကတော့ဝင်ကုန်ပြိ။blog နဲ့
ရင်းနှီးတာမကြာသေးဘူး။ခရီးသွားမှတ်တမ်း တစ်ခှဘဲ blogရေးကြည့်ဘူးသေးတာ။ (http//shwepont.blogspot.com) :P ၊ thingyan blog မှာတော့ငါးခုလောက်ရေးဖြစ်ရင်း ပိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်။ MBF network ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်။ :)
CMS 11:04 pm
gue :> chatting လုပ်နေတာထက်စာရင် ဘလော့ရေးတာက ပိုကောင်းပါတယ်ဗျာ။ စာတွေ ဗဟုသုတတွေ ရှာပြီး စုမိ ဖတ်မိတာပေါ့ :) ခရီးသွားမှတ်တမ်းလေးကို ဖတ်ပြီးပြီ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ။ MBF ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ။ gue ရဲ့ ဘလော့ကို list မှာထည့်ထားပါတယ်။
yadanar 10:48 am
ကိုချမ်း . .
မနေ့က စာရေးတာ"Connection Down" နေတာမရောက်လို့ အခုထပ်ရေးလိုက်တာ။မနေ့က
"Myanmar Time Journal"က "Reporter"
ကလာပြီးတော "IT" သတင်းလာမေးတယ်။
ညီမလည်း "MBF" ကိုပြလိုက်သေးတယ်။ "Blog & MBF "အကြောင်းရေးချင်လို့တဲ့ ကိုချမ်း . . . .ညီမကခွင့်တောင်းပေးတာ။
CMS 10:47 pm
မန်းလေးဘလော်ဂါတွေအတွက် ၀မ်းသာစရာပါပဲ ... အားလုံးလည်း သဘောတူမှာပါ .. တစ်ခုရှိတာက ဘာတွေရေးမှာလည်း ဆိုတာပါပဲ .. အသေးစိတ်ကို မေးလ်ပို့နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် :)
ju juu 3:52 pm
ဒီမှာပါချင်တယ်... အိမ်သာပြည့်သွားပီလား အဟိ... နောက်တာ:P
mynet 12:48 am
i have been added this link to site.
thaks for creating that.
ကျွန်တော့်ကိုလည်း ပါမယ်ဗျို့ "Mandalay Bloggers Feeds Network" မှာ ပြောတာနော် တမျိုး မထင်နဲ့မ